China Chiedza brown brown T101 / Brown T108 / Brown T103 fekitori uye vagadziri | Baizan
Chiedza brown brown T101 / Brown T108 / Brown T103
Chiedza Brown Pvb
Baizan PVB interlayer ndeye macromolecule zvinhu zvakaumbwa ne polyviny, butyral resin iyo yakaiswa epurasitiki uye yakadhonzwa nepurasitiki. Yedu PVB firimu ine yakanakisa mwenje kujekesa, kupisa uye kutonhora kuramba, kuomarara, iri kunamatira kune inorganic girazi uye kugadzirwa kwe laminated chengetedzo girazi. Zvakajairika kuwanda kududzirwa kuri pakati pe0.2 mm - 2 mm.
Baizan PVB interlayer inowanzoshandiswa mukugadzira laminated chengetedzo girazi. Laminated girazi igirazi rakakosha rinoiswa nePVB firimu pakati pezvikamu zviviri zvegirazi rakajairika, iro riri pasi pekupisa kwakanyanya kupisa uye kumanikidza, inosunga kuti igadzire kuvaka kumwe chete. Nekuda kwePVB laminated girazi riine basa rekuchengetedza, kuchengetedza kupisa, chiratidzo cheruzha, uye ultraviolet kuramba, nezvimwe
Pashure: Bvisa pvb
Zvadaro: yakajeka green GN101 / Vridis GN108
Chiedza chebhuruu B113 / Opaque mwenje webhuruu B102 / Ford ...